समाज – Page 190 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २१:४१ English
राष्ट्रपति चुरे संरक्षित क्षेत्रमा वन फडानी ४ बैशाख २०६९, सोमबार १२:१६
असनाको काठसहित दुई ट्याक्टर पक्राउ ३ बैशाख २०६९, आईतवार ११:४६
कोहलपुर, ३ बैशाख । ईलाका वन कार्यलय कोहलपुरले असनाको काठ सहित २ ओटा ट्याक्टर पक्राउ गरेको छ । बानियाभारमा रहेको नवप्रतिभा सामुदायिक वनबाट ल्याईएको काठ भनिए पनि उक्त काठ अबैध भएको ईलाका वन कार्यलय कोहलपुरका फोरेष्टर दिप बहादुर शाहिले बताउनुभयो । २ ओटा ट्याक्टरमा २ ओटा गोलिया सहित..
प्रहरीमाथि दुब्र्यवहार गर्ने विदेशी खेलाडी र बन्दको प्रचार गर्दै हिडने पक्राउ २ बैशाख २०६९, शनिबार १८:१४
काठमाडौं, २ बैशाख । रंगशालामा भइरहेको ब्रिटिस गोर्खा कप फुटवल प्रतियोगतामा संकटा क्लवका अफ्रिकन मुलका खेलाडी २८ वर्षीय लिमिडामी र १८ वर्षीय पाभिसले मादक पदार्थ सेवन गरी प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार गरेकोले आज १५ः२० बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । त्यसैगरी बैशाख ३, ४ र ५ गतेको बन्द सफल..
बाँकेमा पहिलो पटक हार्डवयस्टर मेसिन, किसानहरु खुसी
नेपालगञ्ज, २ बैशाख । बाँके जिल्लामा पहिलो पटक किसानका लागि ‘हार्डवयस्टर’ मेसिन भित्रिएको छ । धान, गहुँ तथा मकै बाली काट्न प्रयोग हुने हार्डवयस्टर मेसिन पहिलो पटक जिल्लामा भित्रिएको हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेको पहलमा भित्रिएको मेसिनप्रति किसानहरुको माग बढ्दै गएको छ ।..
छोरी विवाहका लागि तयारी गर्दै गरेको घरबाट लाखौको लुटपाट
महोत्तरी, २ बैशाख । महोत्तरीको सिमरदहिमा छोरी विवाहका लागि तयारी गर्दै गरेको घरबाट गए राती सशस्त्र डाँक समुहले लाखौको लुटपाट गरेका छन् । महोत्तरी सिमरदही २ का सिताराम चौधरीको घर बाट बिहान तीन बजे छोरी विवाहका लागि तयारी अवस्थामा राखेको साढे चार लाख रुपैया, १५ तोला सुन, ७० तोाल चाँदी..
जाजरकोटको अर्छानी गाविसमा बेन्च विहिन २ विद्यालय १ बैशाख २०६९, शुक्रबार ०९:२१
जाजरकोट, १ बैशाख । जाजरकोटको पश्चिमी एक गाविसका दुई विद्यालयमा बेच्च नहुदा विद्याथीहरु भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाको अर्छानी गाविस ५ देउराली निम्न माध्यामिक विद्यालय र वडा नम्वर ६ को प्रगतिशिल प्राथमिक विद्यालयमा एउटा पनि बेन्च नहुदा भुइँमै बसेर पढ्न परेको..
गाउँ बनाउदै कपिलवस्तुका महिलाहरु
कपिलबस्तु, १ बैशाख । कपिलवस्तु पश्चिमको पत्थरदेईया गाविस–९ ईमिलिखर्कका महिलाहरु गाउँलाई नमुना गउँ बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । गाउँ बनाउन अरु नभई पहिले आफै कस्सिनु पर्ने भन्दै महिलाहरु विकासका काममा लागेका हुन् । ५ वर्ष अघि गाउँका महिलाहरुले गठन गरेको चेतना महिला समूहमा आवद्ध..
चितवनमा विद्युत चोरी गर्ने २७ जना पक्राउ ३० चैत्र २०६८, बिहीबार ११:४४
चितवन, ३० चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत चोरी गर्ने २७ जनालाई आज बिहान प्रक्राउ गरेको छ । पश्चिम चितवनको पटिहानीबाट २६ जना र गीतानगरबाट १ जनासहित २७ जनालाई प्रक्राउ गरिएको हो । विहानैदेखि खटिएको १५ जना कर्मचारी, ७ जना जनपथ प्रहरी र २० जना शशस्त्र..
झापामा एक शरणार्थी युवकको हत्या
झापा, ३० चैत । झापाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा एक युवको हत्या भएको छ । बेलडाँगीमा बस्दै आएका ३१ वर्षीया भीमबहादुर राईको गएराति हत्या भएको हो । शिविर सेक्टर एफ एकका छाप्रा नम्बर एक सय ६७ का राईको अज्ञात समूहले छरा प्रहार गरी हत्या गरेको हो । घटनाका सम्वन्धमा अनुसन्धान भइरहेको ईलाका..
शिक्षा विभागद्वारा विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति वितरण २९ चैत्र २०६८, बुधबार १८:०८
काठमाडौ, २९ चैत । शिक्षा विभागले आर्थिक २०६८÷०६९ का लागि मुलुकभरका विद्यालयमा अध्ययनरत विभिन्न समूहका विद्यार्थीलाई विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । विभागले कक्षा एकदेखि आठसम्म अध्ययन गर्ने १३ लाख ६ हजार ८८ जना दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो ।..
ईन्डोनेसीयामा आएको भुकम्पको धक्का नेपालमा पनि
काठमाडौ, २९ चैत । इन्डोनेसियामा आज गएको भूकम्पको नेपालमा पनि धक्का महसुस गरिएको छ । अमेरिकन जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार इन्डोनेसिया केन्द्रविन्दू भएर ८ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । त्यसको धक्का दिउँसो साढे २ बजेतिर काठमाण्डूलगायतका ठाउँहरुमा पनि गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प..
एमालेले मात्र देशलाई निकास दिन सक्ने एमाले नेता ओलीको दावी २८ चैत्र २०६८, मंगलवार १५:०७
सुर्खेत, २८ चैत । नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निकास दिन एमालेको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभएको छ । सुर्खेतका स्वर्गिय नेता क्रृषि शर्माको स्मृतिमा भएको साताव्यापी कार्यक्रमको आज समापन गर्दै ओलीले अरु सबै पार्टीले सोझा जनतालाई झुक्याएको..
हावाहुरी तथा असिनापानीबाट रौतहटमा दुई जनाको मृत्यु
रौतहट, २८ चैत । आज विहान आएको हावाहुरी तथा असिनापानीबाट रौतहटमा दुई जनाको ज्यान गएको छ । विहान करिव ३ बजेतिर आएको हावाहुरी तथा असिनापानीबाट रौतहटको औरैया गाविस वडा नं. ६ निवासी ४२ बर्षिया रम्भादेवी साह कानु र सोही गाविस वडा नं. ८ निवासी ६२ बर्षिया सुन्दरदेवी राउतको मृत्यु भएको..
शान्ति सुरक्षा नै हिन्दू धर्मसंस्कृतिको संरक्षण – सुशिल नाहाटा २७ चैत्र २०६८, सोमबार १८:५१
काठमाडौं, २७ चैत्र । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सुशिल नाहाटाले हिन्दूधर्म कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि सरकारले सुरक्षा र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । नाहाटाले भने– अहिले हिन्दूधर्म संस्कृतिमाथि चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ, हिन्दूधर्मका मठ..
कांग्रेस सभासद् लक्ष्मी परियार माथि आक्रमण २६ चैत्र २०६८, आईतवार २०:०५
उदयपुर, चैत २६ । कांग्रेस सभासद् लक्ष्मी परियारलाई युवाहरुको एक समूहले कुटपिट गरेका छन् । सो समुहले सभासद् लक्ष्मी परियारलाई उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ८ बगहास्थित सालधारी चौकमा आइतबार बिहान आक्रमण गरेका हुन् । ना ३ ख ५०७२ नम्बरको परेली यातायतमा काठमाडौंबाट गाइघाट आउँदै गरेकी..
चटयाङले एकै परिवारका तीन घाइते २४ चैत्र २०६८, शुक्रबार १८:२४
इलाम, २४ चैत । इलाम जिल्लामा परेको चट्याङ लागेर तीन जना घाईते भएका छन् । इलाम नगरपालिका–७, स्थित धोविधारामा गएराति परेको चट्याङले वालिका सहित एकै परिवारका तीनजना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेमा चार वर्षीया बालिका रुबिना राई, उनका बाबु २३ बर्षीय बिजय राई र आमा २२ बर्षीया रोष्ना राई..